नेपाली गुप्तचर संस्थाको एक रिपोर्ट: एमाले सबै प्रदेशमा कम्जोर , अत्तालिएर केपी ओली सहित शिर्ष नेताहरुको बैठक समेत बस्यो – Sanghiya Online
नेपाली गुप्तचर संस्थाको एक रिपोर्ट: एमाले सबै प्रदेशमा कम्जोर , अत्तालिएर केपी ओली सहित शिर्ष नेताहरुको बैठक समेत बस्यो
Posted on : April 8, 2017 - No Comment
काठमाडौं २५, चैत । नेपाली गुप्तचर संस्थाको एक रिपोर्टले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरगं उत्पन्न गरेको छ । २०६३ सालदेखि लगातार सत्तामा बस्दै आएको एमाले पहिलोपटक सत्ताबाहिर हुँदा अत्तालिएको पछाडीको गोप्य कारणको खुलासा भएपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगीत हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
नौ महिनाअघि कांग्रेस र माओवादीले दिर्घकालिन सत्ता गठवन्धनको गाठो कस्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अहिले एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथी गालि गलैजामा उत्रिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले प्रत्येक भाषणमा पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति देउवा विरुद्ध तल्लो स्तरको कटाक्ष हुने गरेका छन् । केहि दिनअघि मात्रै ओलीले देउवालाई क्षेत्रियतावादी नेता भन्दै व्याङग्य प्रहार गरेका थिए । तर यसको पछाडी गम्भीर कारण छ ।आखिर किन देउवा विरुद्ध खनियो एमाले ?
पछिल्लो २ सातायता एमालेले लगातार रुपमा काँग्रेसमाथी हमला बोलिरहेको छ । हमला बोल्नेमा एमाले अध्यक्ष ओली नै शीर्षस्थानमा छन् । तर हमलाको रहस्य भने अर्कै छ । कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा समेत लेवि तिर्ने कार्यकर्ता भर्ति गरेको एमालेले पछिल्लो समय स्थानीय चुनावका विषमया नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धन विभाग र सेनाको जासुशी संयन्त्रको गोप्य रिपोर्ट हेरेपछि कांग्रेस विरुद्ध खन्निएको स्रोतको दाबी छ ।
कर्मचारी संयन्त्रबाट दुई हप्ता अघि ओलीको हातमा पुगेको तीनओटै सुरक्षा निकायको रिपोर्टमा स्थानीय चुनावमा एमाले कांग्रेसभन्दै निकै पछाडी हुने दावी गरिएको छ ।
एमाले निकट स्रोतका अनुसार सुरक्षा निकायको रिपोर्ट ओलीको हातमा परेपछि उनको निवास बालकोटमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेताहरु बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव योेगेश भटराई, नेता सुवाश नेम्वाङ, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल सहितको गोप्य बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा तिनै निकायले दिएको चुनावको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसको विश्लेषण पनि समेत गरिएको थियो । नेताहरुले त्यही वैठकमै ओलीलाई ‘तपाईको बोली अलि नियन्त्रण गर्नु पर्यो’ भन्दै कुनै जाति वा समुदायलाई गालि नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा रिपोर्टमा उल्लेख भएकाजस्तो चुनावी परिणाम आए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि निकै गम्भीर छलफल भएको स्रोतको दावी छ ।
उक्त गुप्तचरको रिपोर्टमा ७ सय ४४ स्थानीय निकायमा ३ सय ८० कांग्रेसले जित्ने, एमालेले २ सय ३० वटा निकायमा मात्रै चुनाव जित्ने दावी छ । माओवादी चमत्कारीक रुपमा अगाडी आउनसक्ने र राप्रप्रा शुन्य हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसलेभन्दा २ सय ११ कम स्थानीय तहमा जित्ने उक्त प्रक्षेपण आएपछि ओली कांग्रेस विरुद्ध आक्रामक हुन थालेका हुन । कांग्रेस सभापति देउवा चुनावी रणनीतिमा सफल भएको भन्दै ओलीले बैठकमै देउवा विरुद्ध संस्थागत रुपमै लाग्नु पर्ने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ ।
रिपोर्टमा एमालेको प्रदेश नम्वर १ मै अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्वर २ ज्यादै न्युन संख्यामा मात्रै एमाले आउन सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेश नम्वर ३ मा पनि एमाले कमजोर भएको रिपार्टेमा उल्लेख छ । प्रदेश नम्वर ४ मा केही सुधार देखिएपछि प्रदेश नम्वर ५, ६ र ७ मा पनि एमाले कमजोर हुने उल्लेख छ ।
यसको मुख्य कारणमा एमालेले पछिल्लो समय अख्तियार गरेको मधेस, जनजाति र दलित विरुद्धको नीति भएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टमा देशभरको भोट बैक अर्थात निर्णयक भोट सिमान्तकृत समुदाय भएको तर एमाले ति समुदायको विपरितको नीतिमा रहेकाले पनि चुनावमा नकरात्मक असर पर्ने प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ ।
गच्छदारले गद्दारी गरेपछि शिवलाल समूहले मसाल चिन्हलिएर चुनाब लड्ने (सहमति पत्रसहित)
मधेशी मोर्चाका माग ओली र एमालेलाइ अहिले सम्म थाहा छैन !!!
बैशाख पहिलो साता देखि अनिश्चितकालिन आम हड्ताल गर्ने मधेसी मोर्चाको तयारी
धमाधम एमालेका मेयर उमेदवारहरु एमालेलाइ टाटा बाई बाई गर्दै , एमालेमा रुवाबाशी
स्थानीय निकाय चुनाव सार्न एमालेले प्रस्ताव गरेको खुलासा